Ukuzikhulula kwezokwelapha - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke
Wokuziphendulela kwezokwelaphaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-09-02T11:11:07+02:00
Okuqukethwe kwaleli sayithi kungukuthi akuhloselwe ukunikeza iseluleko sezokwelapha, futhi ungathathi indawo yezeluleko zezokwelapha noma ukwelashwa kudokotela wakho. Lolu lwazi luyi akuhloselwe ukuxilonga, ukwelapha, ukwelapha noma ukuvimbela noma yisiphi isifo.
Njalo thintana nodokotela wakho noma uchwepheshe ngaphambi kokuqala noma yikuphi ukwelashwa, ngaphambi kokuqala noma ukuguqula noma yikuphi ukondleka, ukuvivinya umzimba, noma uhlelo lokuphila, noma uma unanoma yimiphi imibuzo maqondana nesimo sakho sempilo.
Imininingwane nemibono, izindatshana, imikhiqizo, noma okuqoshiwe okuqukethwe kulawa mawebhusayithi kwenzelwe izinhloso zokwazisa kuphela futhi ziqondiswe emphakathini jikelele.
Le webhusayithi ingaqukatha imininingwane enikezwe ngabantu besithathu noma etholwe ngezixhumanisi eziya kwamanye amawebhusayithi akwi-Intanethi. Izaziso ezimayelana nalolo lwazi noma izixhumanisi zinikezwa kuyo yonke iwebhusayithi. I-GAAPP ayilawuli noma ithathe noma yimuphi umthwalo wemfanelo wolwazi olunikezwa abantu besithathu noma okuqukethwe kwamanye amawebhusayithi e-Inthanethi esiwanikeza izixhumanisi kuwo.